Foko sy Fiaviana · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Jolay, 2010
Maty novonoin'ny vadiny Koreana ny vady andefimandriny tanora Vietnamiana iray tany Korea. Maneho fiaraha-mioriny noho ity fahafatesana mahatsiravin'ity vady andefimandry tanora ity ireo mpitoraka blaogy Koreana, sady manao antso avo amin'ny governemanta mba hanaraka ny fanajàna zon' olombelona ny fahazoana ireo vady andefimandry avy any ivelany .
Afrika Mainty 23 Jolay 2010
An-dàlana ny fifidianana ho filoham-pirenena hanan-tantara any Ginea raha efa akaiky hivoaka amin'ny fomba ofisialy ireo valim-pifidianana ofisialin'ny fiodinana voalohany . Nalamina ho amin'ny 1 Aogositra ny fihodinana faharoa [fr] noho ny fandinihana ireo lazaina ho hosoka ka nanisahana ny datin'ny 18 Jolay efa voalamina tany amboalohany. Toa milaza ny isam-bato tsy ofisialy tamin'ny fihodinana voalohany fa nanana vintana tsara hirosoana amin'ny fifidianana faharoa i Cellou Dalein Diallo sy i Alpha Condé . Na dia eo aza ireo fametrahana ahiahy maro mikasika ny fisiana hosoka eny an-tsefantsefany eny , ny fihetseham-po taratra amin'ny ankapobeny dia ny fahamaivanana sy ny fahafaham-po fa vita tsy nisy savorovoro ihany nony farany ny fanisam-bato, sy ny tahan'ny fandraisan'anjaran'ireo mpifidy marobe Tafiditra mavitrika amin'izany ihany koa ny tontolon'ny blaogy Gineana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 21 Jolay 2010